के अधिक अप्टिमाइजेसन Google दण्डहरूको कारण हुन सक्छ? - Semalt जवाफ दिनुहुन्छ
Semalt विशेषज्ञ निक Chaykovskiy भन्छन् कि ओभर-अप्टिमाइजेसन खोज इन्जिन अनुकूलनको समयमा "सेतो टोपी" एसईओ रणनीति को अधिक प्रयोगको रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ। ओभर अप्टिमाइजेसन प्राय: गुगलसँग सम्बन्धित छ किनकि यससँग अन्य खोज इञ्जिनहरू भन्दा बढि उन्नत एल्गोरिदमहरू छन्। यो अस्पष्ट छैन कि अन्य खोज इञ्जिनहरू जस्तै याहू वा एमएसएनलाई अधिक अनुकूलनको लागि जरिवाना छ। पृष्ठलाई राम्रोसँग अनुकूलन गरिएको ठान्नको लागि यसका निम्न मानक कम्पोनेन्टहरू हुनुपर्दछ: कीवर्ड रिच हेडर, एएलटी ट्यागहरू, वर्णन ट्याग, मेटा किवर्ड र वर्णन ट्याग, शीर्षक ट्याग र अन्य पृष्ठहरूमा धेरै सम्बन्धित लिंकहरू। पृष्ठमा URL वा फाइलनाममा कुञ्जी शब्द हुनुपर्दछ। यद्यपि यी कार्यनीतिहरूको प्रयोगका लागि सीमितताहरू छन्, उदाहरण को लागी, तपाईं माथि सूचीबद्ध कुनै पनि घटकमा कुनै दोहोरिएको कुञ्जी हुनुहुन्न, कुनै अदृश्य पाठ हुनुहुन्न, किनकि सबै दिइएको पाठ्य ना the्गो आँखाले देख्न मिल्छ।
पृष्ठ अप्टिमाइजेसनको बेला के बेवास्ता गर्नुपर्छ?
गुगलले खोज ईन्जिनले स्पामको सबै तहहरू पत्ता लगाउन सक्षम हुन सक्छ। यद्यपि यो अप्ठ्यारो हुन्छ कि कुन डिग्री अधिक अप्टिमाइजेसन विस्तार हुन्छ, अस्पष्ट छ, तलका कारकहरूले अधिक अनुकूलन दण्डको कारणको रूपमा सम्भाव्य मान्यताहरू संकेत गर्दछ:
संशोधित पाठको अधिक प्रयोग। परिमार्जित पाठले बोल्ड, H1 ट्याग, र अनुकूलनको समयमा सर्तहरूको रेखांकनलाई जनाउँदछ। खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन विशेषज्ञहरु (SEOs) लक्षित किवर्डको नतीजा अधिकतम बनाउन संशोधित पाठ प्रयोग गर्दछ। जहाँसम्म, संकेत कुञ्जी शब्द यी सबै तरिकाले परिमार्जन गरिएको छ भने; उदाहरणको लागि, बोल्ड, रेखांकित र H1, यसले, परिणामस्वरूप, दोहोर्याइएको कुञ्जी शब्दहरूको परिणाम दिन्छ जुन ओभर अनुकूलनको रूपमा देखा पर्दछ।
धेरै उच्च घनत्व कुञ्जी शब्द। Google ले समग्र पाठको तुलनामा कीवर्ड घनत्वहरूको मूल्या evalu्कन गर्दछ। तसर्थ, यदि कुनै पृष्ठमा दोहोरिने कुञ्जी शव्दहरू छन् जुन समग्र पाठ भन्दा उच्च छ, यसलाई फ्ल्याग गर्न सकिन्छ किनकि यसले औसत आवश्यकता पूरा गर्दैन। पृष्ठ राम्रोसँग साइटसँग एकीकृत गर्न सकिन्छ र अझै फ्ल्याग गर्न सकिन्छ किनकि यसलाई वेब माकुराहरूका लागि ढोकाको लागि गलत अर्थ लगाउन सकिन्छ। यस्तो ढोकाबाट गुगलमा तपाईंको साइटको पूर्ण प्रतिबन्धको परिणाम हुन सक्छ।
धेरै धेरै पृष्ठ-तत्व तत्वहरू। यो सिद्धान्त परिमार्जित पाठ धारणा जस्तै छ, तर यस अवस्थामा अफ-पृष्ठ तत्वहरूले आगमन लिंकलाई सन्दर्भ गर्दछ। धेरै धेरै आगमन लिंकहरूले खोजशब्दहरूको दोहोर्याउन सक्छ, र फेरी यो तपाईंको साइट गुगल द्वारा फ्ल्याग गरिएको परिणाम हुन सक्छ।
के अधिक अनुकूलन अवस्थित छ?
अनुकूलन भन्दा बढी तपाईं प्रतिबन्धित वा पनि गुगल, एमएसएन, याहू जस्तै खोज ईन्जिनहरू द्वारा दंडित गर्न सक्छ? होइन। वेबसाइट राम्रोसँग अनुकूलित हुनका लागि तपाईंको सामग्री खोजी ईन्जिनहरूमा र उत्तम सम्भाव्य प्रकाशमा आगन्तुकहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ। कुञ्जीशब्दहरू र अन्य एसईओ ट्रिकहरूको पुनरावृत्ति र अत्यधिक प्रयोगको मतलब हो, वास्तवमा भन्ने हो कि पृष्ठ राम्रोसँग अप्टिमेट गरिएको थिएन। यदि एक पृष्ठ राम्रोसँग अनुकूलित छ, त्यसैले यो अधिक अनुकूलित हुन सक्दैन। कुनै पृष्ठलाई अनुकूलन गर्दा यो कुञ्जी शब्द घनत्व, भाषा प्रयोग गरिएको, साइटहरू तपाइँको लि link्कको प्रकार र तपाइँको साइटमा लिंक गर्ने जस्ता कारकहरू विचार गर्न आवश्यक छ।